ပြောချင်လွန်းလို့ Background Introduction:
ပြောချင်လွန်းလို့ has been advertising and marketing on Facebook for many years. And ပြောချင်လွန်းလို့ has placed 20 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,ပြောချင်လွန်းလို့ has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I useaspy tool to check.
BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for ပြောချင်လွန်းလို့ on BigSpy, we can see that these ads have gainedalot of likes. Now, BigSpy generatesadetailed Top ad analysis report for ပြောချင်လွန်းလို့. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance ofasingle ad, and analyzes the Top3ads with the best performance from ပြောချင်လွန်းလို့.
1.ပြောချင်လွန်းလို့ Top3Ads Basic Understanding
Name ပြောချင်လွန်းလို့ ပြောချင်လွန်းလို့ ပြောချင်လွန်းလို့
ပြောချင်လွန်းလို့ Marketing Objectives Analysis:
ပြောချင်လွန်းလို့ has been operating in Arcade for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.
Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts atalower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. ပြောချင်လွန်းလို့ best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.
2.ပြောချင်လွန်းလို့ Top3Ads Content Display
Ad Headline ကျော်ကျော်နန္ဒ အသုံးချတာခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက် ပရိသတ်တွေကိုလန့်ဖျပ်သွားစေတဲ့သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ချစ်သူ ထက်ထက်မိုးဦး အအောင်မြင်ဆုံးအချိန်က အနုပညာရှင်စုံလင်စွာနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ဗီဒီယို
Ad Copy Text - - တကယ့် လွမ်းစရာ ဗီဒီယိုလေး ❤️
Link Description အဆိုတော် ကျော်ကျော်နန္ဒက မေလ ၇ ၇က်နေ့မှာကျရောက်တဲ့သူ့မွေးနေ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဇာဇာထက်နဲ့အတူ ဖြူစင်သော အချစ်ဆိုတဲ့ Music video တစ်ခုကို အကြမ်းစားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ဇာဇာထက် အနေနဲ့ သူမအတွက် ဘာတွေပေးဆပ်အနစ်နာခံခဲ့ရလဲ ဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကကျနော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ဓာတ်ပုံထဲက တက်တူးအပြည့်နဲ့လက်ကြီးဟာဆိုရင် အခုပိုပြီး အရှိန်တက်လို့လာပါပြီ။ သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့တချို့ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေဆိုရင် ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့ Comment တွေရေးနေရတဲ့အထိပါပဲ ။ အမြဲတမ်းအဆန်းထွင်လေရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တာမို့ သဉ္ဇာဝင့်ကကျော်ဒီတစ်ခုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာကလည်း အတော့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ပါ ။ အခုကျနော်တို့ ပြောချင်လွန်းလို့မိတ်ဆွေတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အရာကတော့ သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ဓာတ်ပုံထဲက တက်တူးအပြည့်နဲ့ လက်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တခေတ်တခါက အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာမှာရော ရုပ်ရှင်ဖက်မှာရော သူမှသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးကိုတော့ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူး။ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အပေါ်ကို လွှမ်းမိုးမှုလည်း တော်တော်ကို ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ထက်ထက်မိုးဦးတယောက် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အနည်းကင်းကွာနေသော်လည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ရှိနေတုန်းပါပဲ။
Website Link nanmalgyi.com nanmalgyi.com nanmalgyi.com
Text Word Count 173 213 78
Like 3111 4932 2892
ပြောချင်လွန်းလို့ Top 1 Ad Content Analysis：
Ad title: Text is an extension of the creative. ပြောချင်လွန်းလို့ Top 1 ads got 3111 likes. ပြောချင်လွန်းလို့ usesasentence with the finishing touch title: “ကျော်ကျော်နန္ဒ အသုံးချတာခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက်”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power ofasentence is endless.
The text isasupplement to the headline. ပြောချင်လွန်းလို့ shared 173 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.
The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. ပြောချင်လွန်းလို့ should continue to optimize the ad content.
3.ပြောချင်လွန်းလို့ Top3Ads Creative Selection
Ad Time 2019-04-25-2019-04-26 2019-04-23-2019-04-24 2019-04-19-2019-04-20
Landing Page Link https://nanmalgyi.com/archives/73721 https://nanmalgyi.com/archives/73319 https://nanmalgyi.com/archives/72755
The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In justafew seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by ပြောချင်လွန်းလို့ are successful.
ပြောချင်လွန်းလို့ Creative Analysis:
ပြောချင်လွန်းလို့ placedaImage ad in 2019-04-25-2019-04-26, and got 3111 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.
4.ပြောချင်လွန်းလို့ Top3Ads Audience Analysis:
Country Singapore United Kingdom,Australia,Japan... United States,United Kingdom,Australia...
ပြောချင်လွန်းလို့ has the best conversion in Singapore, and can advertise more in Singapore in the future.
5.ပြောချင်လွန်းလို့ Top3Ads Performance Display
Share 102 144 270
Comment 99 243 42
Advertising effectiveness isadirect manifestation of advertising. ပြောချင်လွန်းလို့ ‘s Top 1 ad received 3111 likes, 102 shares, 99 comments in just2days.
Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generatesatop ads report for ပြောချင်လွန်းလို့, helping ပြောချင်လွန်းလို့ to grasp the ad data more clearly.